NXTTY စျေး - အွန်လိုင်း NXTTY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NXTTY (NXTTY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NXTTY (NXTTY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NXTTY ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NXTTY တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NXTTY များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NXTTYNXTTY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0571NXTTYNXTTY သို့ ယူရိုEUR€0.0485NXTTYNXTTY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0438NXTTYNXTTY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0522NXTTYNXTTY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.518NXTTYNXTTY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.361NXTTYNXTTY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.28NXTTYNXTTY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.214NXTTYNXTTY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0765NXTTYNXTTY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0799NXTTYNXTTY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.28NXTTYNXTTY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.443NXTTYNXTTY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.311NXTTYNXTTY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.29NXTTYNXTTY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.9.64NXTTYNXTTY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0785NXTTYNXTTY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0867NXTTYNXTTY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.78NXTTYNXTTY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.398NXTTYNXTTY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.05NXTTYNXTTY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩67.95NXTTYNXTTY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦21.95NXTTYNXTTY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.21NXTTYNXTTY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.58
NXTTYNXTTY သို့ BitcoinBTC0.000005 NXTTYNXTTY သို့ EthereumETH0.000147 NXTTYNXTTY သို့ LitecoinLTC0.001 NXTTYNXTTY သို့ DigitalCashDASH0.000585 NXTTYNXTTY သို့ MoneroXMR0.000613 NXTTYNXTTY သို့ NxtNXT4.21 NXTTYNXTTY သို့ Ethereum ClassicETC0.00827 NXTTYNXTTY သို့ DogecoinDOGE16.85 NXTTYNXTTY သို့ ZCashZEC0.000619 NXTTYNXTTY သို့ BitsharesBTS2.19 NXTTYNXTTY သို့ DigiByteDGB1.95 NXTTYNXTTY သို့ RippleXRP0.198 NXTTYNXTTY သို့ BitcoinDarkBTCD0.00195 NXTTYNXTTY သို့ PeerCoinPPC0.191 NXTTYNXTTY သို့ CraigsCoinCRAIG25.72 NXTTYNXTTY သို့ BitstakeXBS2.41 NXTTYNXTTY သို့ PayCoinXPY0.985 NXTTYNXTTY သို့ ProsperCoinPRC7.08 NXTTYNXTTY သို့ YbCoinYBC0.00003 NXTTYNXTTY သို့ DarkKushDANK18.1 NXTTYNXTTY သို့ GiveCoinGIVE122.19 NXTTYNXTTY သို့ KoboCoinKOBO12.82 NXTTYNXTTY သို့ DarkTokenDT0.0526 NXTTYNXTTY သို့ CETUS CoinCETI162.9